Ama-Proteas azodlala ne-Ireland ngoJulayi
eGoli: i-Cricket South Africa (CSA) ijabulela ukuqinisekisa ukuthi ama-Proteas azodlala i-series yemidlalo emifushane okokuqala ne-Ireland ngoJulayi 2021.
Imidlalo ihlelelwe ukudlalwa ngo-11-25 Julayi futhi kuzoba ama-One Day Internationals (ODI) amathathu azoba ingxenye yohlelo lwe-ICC Cricket World Cup Super league (CWCSL) nama-T20I amathathu, imidlalo izodlalelwa e-Malahide nase-Stormont.
Kuzoba okokuqala ama-Proteas evakashela e-Ireland ezodlala imidlalo engaphezu kowodwa, bavakasha ngo-Juni 2007 kuphela bedlala i-ODI e-Belfast.
“Siyakuthokozela ukusheshe siphethe ngezinsuku futhi ngalokho besithanda ukubonga i-Cricket Ireland ngokubambisana kwabo kanye nokuzimisela ukuzivumelanisa nohlelo lohambo njengoba siqhubeka nokuqedela uhlelo lethu lobusika,” kuphawula i-CSA Director of Cricket, u-Graeme Smith.
“Lolu hambo luphawula isahluko esisha esibalulekile emlandweni wethu njengoba sivakashela elinye lamazwe akhula ngokushesha ekhilikithi ukuvakashela imidlalo eyisithupha.”
“i-Ireland izikhombise ukuba iqembu eliqhudelanayo eminyakeni edlule, nesithombe esikhulayo kumdlalo womhlaba. Kuzophinde kunike abadlali bethu ithuba lokudlala imidlalo yezizwe zomhlaba kwisimo abangasijwayele, ngakho siwulindele umqhudelwano.”
u-Warren Deutrom, i-Chief Executive ye-Cricket Ireland, enezezela: “Njengoba kunoshintsho olukhulu kwi-Future Tours Programme ngenxa yokuhlehliswa kwemidlalo yasekhaya kusukela ngo-2020 – wonke amanye amazwe bekumele ashintshe izinhlelo zemidlalo kwisikhathi sika- 2020-2023 – kube indida yangempela kubabhali bekhilikithi yomhlaba ukuzama ukuhlanganisa izinto.”
“Siyilindele isizini elandelayo futhi sibonga abasivakashelayo nokusebenzisana nathi kulesizini ehlelwe kabusha. Kubadlali bethu abakhulile, kunemidlalo eyisithupha ye-World Cup Super League ekhona kuhlelo, lapho esamukela khona i-South Africa eyagcina ukudlala lapha eminyakeni ewu-14 edlule.”
Ama-Proteas adlala futhi ahlula i-Ireland kuma-ODI amahlanu eminyakeni adlule, okubalwa nokuhlangana kwabo kwi-2007, 2011 ne-2015 ICC Cricket World Cups. Begcina behlangana kwaba umdlalo owodwa e-South Africa kuvakasha ama-Irish ngo-2016.
Lezizwe azikaze zihlangane kumdlalo we-T20I.
Umlingo ka-Miller awanelanga njengoba i-Pakistan inqobe i-T20 series Oqophe umlando u-Pretorius ukhiphe izinti ezinhlanu ama-Proteas elinganisa i-series i-CSA iqinisekisa uhlelo lohambo le-Pakistan Ama-Proteas ahlulwe nokho u-Markram ethole ikhulu i-CSA iyaziqhenya ngo-Ismail othole umklomelo we-ICC u-Linde, u-Markram no-VD Dussen banike ama-Proteas ithemba e-Rawalpindi Ama-spinners anika ama-Proteas ithemba Izinti ezinhlanu zika-Nortje ukuhola ukulwa kwama-Proteas osukwini lesibili i-Cricket Australia imemezela ukuhoxa kuhambo lwase-SA Izinti ezinhlanu zika-Nauman zinqobele i-Pakistan i-Test okokuqala u-Rabada ukhiphe inti yesi-200 ngaphambi kokuthi izinti selishonile zihlukumeza ama-Proteas